Arabia Saodita:Ny fisaraham-panambadiana, teny tsy misy dikany ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2008 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, عربي, Español, Italiano, فارسی, English
“Dia ho lasa teny maivana (tsy misy dikany) ve ny fisaraham-panambadiana?” hoy ny fanontanian’i 3abira Sabbel, vehivavy saodianina mpitoraka blaogy [amin’ny teny arabo], ao anatin’ny hafatra iray mandalina ny fahasamihafàn’ny vehivavy ankehitriny sy ny reniben’izy ireny, ary ny antony mahatonga ny tanora lahy sy vavy hieritreritra fa zava-mora ny manafoana ny fikambanany.
Nasiany tsindrim-peo ao anatin’ny hafany, amin’ny alalàn’ny famaritana ny vaninandron’ireo renibentsika “tsy nahay namaky teny sy nanoratra” “nifehy ny akany” :
Fahiny, nandao ny tranon-drainy ny zazavavy iray mba handeha hiara-honina amin’ny vadiny, ary ny tranon’ny vadiny ho any amin’ny fasany (araka izay nilazàn’izy ireo azy tany aloha tany). Ny vehivavy no nandray ho andraikitra ny fikarakaràna manontolo ny tokantrano sy ireo izay nonina tao, na izany tao an-tranon-drainy na ny an’ny vadiny, izany rehetra izany, tsy asiana taraina. Mizaka ny tsy maha-eo ny vadiny rehefa lasa miasa izy, sady reny izy no ray ho an’ireo zanany ; ary tsy maintsy mijoro ho vehivavy matanjaka, amin’ny maha-reny, anabavy, ary vady azy ho an’ireo lehilahy izay miankina aminy. Nanàngana ny tranony, niaraka tamin’ny vadiny, ary nanampy azy tamin’ny fiainana andavanandro, na dia teo aza ny tsy fahaizany mamaky teny sy manoratra ary ny tsy fahampian’ny fahalalàna.
Toa lavitra an’ireo tovovavy ankehitriny izany famaritana izany, izay ilazàn’i 3abira fa tsy dia raharahain’izy ireo loatra ny hametàhana ny hoe “nisara-banambadiana” eo alohan’ny anaran‘izy ireo – misaotra ny fitsabahan’ireo ‘”vahiny” :
Ny teny hoe “nisara-panambadiana”, fahiny, dia iray amin’ireo ompa goavana fifamelezan’ny samy vehivavy. Naleon’izy ireny maty toy izay antsoina hoe nisara-panambadiana. Niainàna izany mandrapahatongan’ny taonjato maoderina, izay nisian’ny vondrona vahiny vitsivitsy nitsabaka tamin’ny fiainanay arabo, ka namokivoky ny fitakianay ny zon’ny vehivavy, ary tena tsy takatro velively izay antony nahatonga izany??!! Tsy haintsika ve ny mitondra ny fiainantsika??! Sa ho an’ny Papa sy ny Katolika dia manao tsinontsinona loatra ny vehivavy ny Finoana Silamo raha mitàha amin’ny hafa ka nandraisana fepetra goavana? Ahoana no hamelàntsika ny hijabajabahan-dry zareo amin’ny fiainantsika sy hitaky fitoviana, raha ny vehivavy any amin’ny taniny aza mbola mikaikaika sy matim-bono voatsatoky ny antsiny ihany?
Ny vokany dia :
Ankehitriny isika dia miaina amin’ny vaninandro izay tsy mampihetsi-bolomaso velively ny vehivavy raha hatao hoe nisara-panambadiana izany, fa ny tena loza dia mangataka fisarahana noho ny antony tsy dia misy dikany ry zareo! Ny hoe misara-panambadiana dia lasa tena tsy misy dikany ho an’ny sasany, eny fa na dia noho ny antony foromporonin’ny saina fotsiny aza.
Ny mpitoraka blaogy 3abira dia manolotra ny lisitr’ireo antom-pisaraham-banambadiana, araka izay ilazàn’ireo vehivavy azy, izay hitany fa mampihomehy sy mahamenatra :
1. زوجها تزوج عليها ، تطلب الطلاق (رغم إباحة الدين له بذلك)،، أعلم أن الكثيرات يعاتبنني على تأييد تعدد الزوجات ، وقد سبق وقلت أنني فتاة مثلكن ولي مشاعر سوف تجرح عند حصول هذا الأمر لي ، لكن أحمد الله على نعمة العقل الذي يوجد عندي، فلا أمنع ما حلله الله 🙂
1. Nanambady indray ny vadiny ka dia mangataka fisaraham-panambadiana izy, nefa ny fivavahantsika aza dia mamela malàlaka ny fanànana vady maro. Fantatro fa maro aminareo no hanatsiny ahy amin’ny fanohànako ny fanànana vady maro, ary efa nomarihako fa tovovavy toa anareo ihany koa aho, manana fihetseham-po tsy maintsy ho tohina sy torotoro raha avy izay hahatongavan’izany amiko. Saingy isaorako Andriamanitra nanome ahy saina amam-panahy tsy hizotra amin’izay efa nameperany rahateo.
2. Tsy zakany ny fihetsika avy amin’ny vadiny ary dia mangataka fisaraham-panambadiana izy nefa tsy mbola nanàndrana niresaka izany tamim-badiny akory. Ny fialantsininy dia ny hoe tokony ho nitandrina ny fomba amam-pihetsiny ralehilahy ary tsy nanao zavatra manorisory an-dravehivavy.
3. Tsy fiainana nofinofy tonga lafatra ny fanambadiana!? Tsy mahalala izy na dia tenim-pitiavana na fambaboana iray monja aza 🙁 Na fialàna bàla hafa mahalasa adala ahy. Ny tena manahirana dia mifikitra mafy amin’ny fisaraham-panambadiana ny vehivavy, na inona na inona lazain’ireo olona tsara sitra-po sy manome toro-hevitra tsara ho azy ireo.
Miaiky ny mpitoraka blaogy fa mànana andraikitra koa ao anatin’izany fiakàran’ny fisaraham-panambadiana izany ny lehilahy. Hoy izy manamarika :
Tsy te-handiso be fotsiny amin’izao ny vehivavy aho.Ny lehilahy, amin’izao andro iainantsika izao, dia mitovy lenta amin’ny vehivavy, ary izy ireo koa dia tokony homena tombom-pahendrena sy fahafàhana mitantana ny fiainany. Naheno aho, ary vavolombelon’ny raharaham-pisaraham-banambadiana maro avy amin’ny fangatàhana tsy mitombina.
Raha momba ny olana aroson’ny lehilahy ho antom-pisarahana indray, dia ireto no voaangony :
1. Tsy mahay manàja ahy izy – ary tsy manao izay hampivoarana ny toe-draharaha anefa ralehilahy na tsy miresaka aminy (amin-dravehivavy) izay tiany sy tsy zàkany.
2. Fanambadiana ara-pomban-dràzana ny ahy ary tsinjoko ho tsy mahomby!
3. Nataoko izao [fisaraham-panambadiana] satria tezitra aho – satria nahoana? Mba hanaporofoana fa lehilahy izy.
Ho famarànana, manoro hevitra i 3abira ho an’ireo izay mamaky azy mba hijanona mandrakariva akaikin’ireo soatoavina taloha ka tsy hamela ny fomba maoderina sy ny fironany hamotika ny fiainam-pianakaviany. Hoy izy :
Raha nisisika mafy nifikitra tamin’ny fomban-drazantsika sy ny maha isika antsika isika, tsy ho tonga amin’izao toe-javatra misy antsika ankehitriny izao. Ny anton’ny nahatonga antsika amin’izao dia ny fitakiantsika fivoarana nefa tsy haintsika akory hoe fivoarana manao ahoana.
Araka ny loharanom-baovao iray [amin’ny teny anglisy], dia manodidina ny 62%-n’ny fanambadiana no miafara amin’ny fisaraham-panambadiana any Arabia Saodita. Loharano iray hafa [amin’ny teny anglisy] kosa no milaza fa 38% ny fisaraham-panambadiana.